Ihe ngosi ohuru ohuru | Martech Zone
Ọ bụ ihe na-akpali mmasị na ndị nọ na ụlọ ọrụ mgbasa ozi na-elekọta mmadụ kwenyere na ihe niile na-eme na mgbasa ozi ọha na eze dị ọhụrụ. Ka m na-eleghachi anya azụ ahịa, nchekwa data nchekwa data, ịkparịta ụka n'networkntanet na mgbasa ozi - Ekwenyeghị m na ebumnuche anyị maka azụmaahịa dị iche. Enwere ọtụtụ mbibi na akụkọ gbara ọchịchịrị gbasara otu esi eme ya azụmahịa ọ bụla kwesịrị imeghari ma ọ bụ na ha ga-ada. Ekwetaghị m na nke ahụ bụ eziokwu.
Mgbe m kwenyere na ndị na-ajụ ase agbanweela (ma melite), azụmaahịa ka na-anwa ime ihe ha nwere. Ebumnuche maka azụmaahịa adịbeghị iche, ọ bụ ndị na-ajụ ase na atụmanya nke ndị ahịa agbanweela.
Ọ bụrụ na m dee akwụkwọ ozi maka azụmaahịa, ọ nwere ike inwe ihe mgbaru ọsọ iri a:
Azụmaahịa m ga-abụ dị ebe atụmanya na ndị ahịa na-achọ anyị.
Azụmaahịa m ga-abụ dị mgbe atụmanya na ndị ahịa chọrọ anyị.
Azuma m zaghachi mgbe atụmanya na ndị ahịa na-arịọ arịrịọ.
Azụmahịa m ga-amalite atụmanya ziri ezi maka atụmanya na ndị ahịa.
Azuma m zipu gini ndị ahịa na-atụ anya.
Azuma m anapụta mgbe anyị kwuru na anyị ga-eme ya.
Azuma m kweta mgbe anyi mehiere.
Azuma m idozi ihie ụzọ anyị.
Azụmaahịa m ga-abụ n'eziokwu na gị.
Azuma m na-ekwurịta okwu nke ọma ọganihu n'ụzọ.
Na nzaghachi maka imeghe, ime ihe n'eziokwu, ịza ajụjụ ma dịnụ, azụmaahịa na-atụ anya na atụmanya na ndị ahịa ga-eweghachite ihu ọma - na-ekwurịta etu ha siri rụọ ọrụ ha. Nke a abụghị naanị ezigbo ahịa ma ọ bụ ọhụrụ ahia, nke a bụ ezigbo azụmahịa. Ihe ndị a bụ ebumnuche azụmaahịa mụ na ha rụkọtara ọrụ.
Ka ị na-enyocha ihe mgbaru ọsọ ndị a, ọ nweghị ihe ekwuru banyere mgbasa ozi ọhụụ, ahịa nwere ike ịnweta, mgbasa ozi mmekọrịta, ọchụchọ, njikarịcha nyocha, twitter, Facebook, email ma ọ bụ usoro ahịa ọ bụla ọzọ. Dị adị nke ndị mmụọ ahụ na-eme ka ọ dịkwuo mfe iru ihe mgbaru ọsọ azụmaahịa - mana ọ chọghị ka azụmahịa ọ bụla nakweere ha.
Companylọ ọrụ gị nwere ike ịchọpụta na ọkpụkpọ oku oyi ochie na-atọ ụtọ. Cheta - ọ ka bụ eziokwu na imirikiti azụmaahịa anabatabeghị mmekọrịta ọha na eze, ọtụtụ na-enwe ihe ịga nke ọma, na-eto eto na ọbụlagodi azụmaahịa na-aga nke ọma. Were Apple ihe atụ… Ahụghị m ka Apple na-emeghe, uzo ma ọ bụ na-arụ ọrụ na mgbasa ozi mmekọrịta - mana ha na-eme nke ọma, ọ bụghị ya?
Isi okwu m abughi ịkụda ụlọ ọrụ ịnakwere na iji usoro mgbasa ozi. Dị nnọọ iche. Ọ bụrụ na azụmahịa gị chọrọ ịnwe ihe mgbaru ọsọ nke ngosipụta dị n'elu, enweghị m obi abụọ ọ bụla na mgbasa ozi mmekọrịta ga-eme ka azụmahịa gị kwalite ngwa ngwa nyere ezigbo ego na usoro ziri ezi. Ọ bụrụ na ihe mgbaru ọsọ ndị ahụ abụghị ihe mgbaru ọsọ nke ụlọ ọrụ gị, mgbasa ozi mmekọrịta nwere ike ọ gaghị adaba.
Chee echiche tupu ị malie! Mmiri dị oyi na omimi. 🙂
Ebe E Si Nweta Foto: (CC) Brian Solis. www.brianolis.com. Drawing bụ site Hugh MacLeod si Apgba Ohere.
Tags: brian solishugh macleodọhụrụ mediaelekọta mmadụ media
Ekwenyere m kpamkpam. Anụrụ m ọtụtụ ụlọ ọrụ na-ajụ onwe ha "Anyị kwesịrị ịnọ na Facebook iji chọta ndị ahịa ọhụrụ?". Azịza nke kachasị bụ mba, n'ihi na ọ ga-ada ihe mgbaru ọsọ mbụ gị: ị ga-enweta ebe atụmanya na-achọ gị. Ndị mmadụ na-aga Facebook iji jikọọ na ndị enyi na ezinụlọ, ịkọrọ ọchị, na igosipụta onwe ha. Ha anaghị aga ịchọta ụlọ ọrụ ọhụụ ka ha na ha wee zụọ ahịa. Ndị ụlọ ọrụ nwere ike iji ngwa ọrụ nke mgbasa ozi mmekọrịta na-enweghị iji ngwaọrụ dịka Facebook, nke enweghị mgbe enyere iji nyere ha aka ịchọta atụmanya ọhụrụ. N'eziokwu, a ga - emeziwanye ngwa ọrụ mmekọrịta maka azụmaahịa, mana nke a apụtaghị na ị na - eji bullhorn mgbe ihe ịchọrọ bụ magnet.
Nnukwu ọgụgụ, ekele maka ịkekọrịta!
Ndepụta gị masịrị m. Echere m na ọ nwere ike inyere ndị ọzọ aka ịtọlite ​​ebumnuche azụmahịa ha ma soro ha nke ọma. Enwere m mmasị na posts na-eweta ihe atụ doro anya na ndụmọdụ bara uru.